पाकिस्तानले हिन्दू मन्दिरलाई राष्ट्रिय धरोहर घोषणा गर्‍यो, हिन्दू विवाह ऐन पनि पारित
हिन्दूहरूप्रति सद्भाव देखाउँदै पाकिस्तानले खैबर पख्तुनख्वामा प्राचीन हिन्दू धार्मिक स्थल पञ्च तीर्थलाई शुक्रवार राष्ट्रिय धरोहर बनाएको छ । पाँचवटा तलाउ भ...
यस्ता काम गरेकाहरु जान्छन् मृत्युपछि 'नर्क' !
हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न शास्त्रमा मानिसले आफूले गरेका कर्म अनुसारको फल पाउने भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ । अर्थात् मानिसले जस्तो कर्म (काम) गर्छ त्यस्तै फल पा...
हिन्दु धर्ममा किन गरिन्छ मन्दिरको परिक्रमा ?
हिन्दुहरू आफ्नो आस्था प्रकट गर्न नियमित मन्दिर जाने गर्छन् । मन्दिर गएपछि देवीदेवताको प्रतिमामा पूजाअर्चना गरिन्छ । त्यसपछि मन्दिर परिक्रमा गर्ने विधान हुन्छ । के हो त यसको कारण ? खासमा मन्दिर परिक्रमा गर्नु लाभदाय...
'खेमा लिपि'को संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जुटेका भीम
कुनै पनि जातिको पहिचान भनेको उसको भाषा र संस्कृति हो । पश्चिमा भाषा र संस्कृतिका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा मातृभाषाहरू हराउँदै/लोप हुँदै गएका छन् । राज्यले प्राथमिक तहसम्म मातृभाषा पठन–पाठन गराउन...
रावणसँग साँच्चिकै थियो त पुष्पक विमान ?
भारतवर्षका प्राचीन ग्रन्थहरूमा आजभन्दा लगभग १० हजार वर्षपहिले विमानहरूको चर्चा गरिएको पाइन्छ । रामायणमा रावणको पुष्पक विमान एउटा उदाहरण भयो । सैनिक...
स्वस्थ दूध पिउने बच्चाहरु बोसोयुक्त अर्थात चिल्लो पदार्थ बढी भएको दूध पिउनेहरूको तुलनामा बढी वजन अर्थात मोटोपनको संभावना कम हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । &nb...
नराम्रो सपना देखेर चिन्तित ? यसो गर्नुस् दोष कट्टिन्छ
सपनाले वास्तविक जीवनका धेरै पक्षबारे जानकारी दिन्छ । कहिलेकाहीँ नराम्रा सपना देखिन्छन्, जसका लगि केही विधि अपनाउनु जरूरी छ । यसो गरेको खण्डमा नराम्रा सप...
यो भुवा कैको पाँच पौण्डु देउको का बाट उब्जी मन्त लोक उब्जी त्याँ बाट इन्द्रका बार इन्द्रका बार भुवा खेलायो....। जस्ता उल्लेखित लय र भाका आजभोलि...
महाभारतको युद्ध एक युग समाप्त हुने बेलामा भएको थियो । संसारमा फैलिएको पाप र अनाचारलाई ध्वस्त पारेर धर्मको ध्वज लहराउनका लागि युद्ध अनिवार्य थियो ...
कसरी जन्मियो चन्द्रमा ? जान्नुस् पौराणिक कथा
सुन्दर र चम्किलो चन्द्रमालाई हिन्दू धर्ममा देवताको स्थान दिइएको छ । पूजनीय चन्द्रदेवको जन्मको कथा पुराणहरूमा फरक फरक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । वैदिक साहित्यमा च...
पृथ्वीमा मात्र हैन, यी ६ ग्रहमा पनि लाग्छ सूर्य ग्रहण
ब्रह्मान्डमा पृथ्वी एक यस्तो ग्रह हो जहाँ सबैभन्दा बढी सूर्यग्रहण तथा चन्द्रग्रहण लाग्ने गर्छ । सौर्य मण्डलमा केही यस्तो पनि ग्रह रहेका छन् जहाँ सूर्य ग्रहण देखिन्छ ।...
सूर्य ग्रहण हेर्दा कुन राशिलाई कस्तो फल ?
सूर्य ग्रहण अहिले लागिरहेको छ । सूर्य ग्रहणका बेला ग्रहणलाई हेर्दा राशि अनुसारको फल मिल्ने धार्मिक विश्वास छ । यसपालिको ग्रहण हेर्न कर्कट, तुला, कुम्भ ...
आचार्य चाणक्य प्राचिन भारतवर्षका महान राजनीतिज्ञ थिए । उनले राज्यसंचालनका क्रममा बनाएका नीतिहरू आज पनि प्रसिद्ध छन् । उनलाई कौटिल्य या विष्णुगुप्तको रूपमा पन...
सर्पको जिब्रो दुई भागमा किन काटिएको हुन्छ ? यो महाग्रन्थमा लुकेको छ रहस्य
सर्पलाई देख्ने बितिक्कै धेरै मान्छेको होसहवास उड्छ। तपाईँले पनि कयौँ पटक सर्प देख्नु भएको होला। यति त थाहा होला कि, सर्पको जिब्रो अगाडिबाट २ भागमा विभाजन...